Paul's 1st Letter to the Corinthians – 2azụ
Home / Bible / Akwukwo ozi / Paul's 1st Letter to the Corinthians
1:1 Paul, -akpọ dị ka onyeozi nke Jizọs Kraịst site n'ọchichọ nke Chineke; na Sọstenis, a nwanne:
1:2 na Church nke Chineke nke di na Kọrint, ndị e doro nsọ nime Kraist Jisus, kpọrọ ịbụ ndị nsọ na ndị niile na-n'ịkpọku aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n'ebe nile ọ bụla n'ime ha na nke anyị.
1:3 Grace na udo unu sitere na Chineke bụ Nna anyị nakwa n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
1:4 M na-enye Chineke m ekele nọgidere gị n'ihi amara nke Chineke nke e nyere unu n'ime Kraịst Jizọs.
1:5 Site na amara, n'ihe niile, ị baa ọgaranya nime Ya, okwu niile nakwa n'ebe niile ihe ọmụma.
1:6 Ya mere, àmà nke Kraịst e wusie ike ị.
1:7 N'ụzọ nke a, ọ dịghị ihe kọrọ unu ihe ọ bụla amara, dị ka ị na-echere mkpughe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
1:8 o, kwa, ga-eme ka ị, ọbụna ruo mgbe ọgwụgwụ, -enweghị ikpe ọmụma, ruo ụbọchị biakwa obibia nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
1:9 Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. site n'aka-ya, ị na-akpọ n'ime nnwekọ nke Ọkpara, Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.
1:10 Ya mere, Ana m arịọ gị, ụmụnna, site na aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, na onye ọ bula nke ị na-asụ ke otu ụzọ, na a gaghịzi na esemokwu dị n'etiti unu. Ya mere, ka ị na-zuru okè, na otu obi na otu ikpe.
1:11 N'ihi na a mere ka m, gbasara gị, ụmụnna m, site ndị na-na Chloes, na e nwere esemokwu n'etiti unu.
1:12 Ugbu a, m na-ekwu nke a n'ihi na onye ọ bụla nke ị na-ekwu: "N'ezie, M nke Pọl;"" Ma abụ m nke Apollo;"" N'ezie, M nke Kifas;" yana: "Abụ m nke Kraịst."
1:13 Kraịst e kewara? Pọl n'obe n'ihi unu? Ma ọ bụ na-gị baptizim n'aha nke Paul?
1:14 M na-ekele Chineke na m baptizim onye ọ bụla nke ị, ma e wezụga Krispọs na Gaiọs,
1:15 ghara onye ọ bụla na-ekwu na ị na-baptizim n'aha m.
1:16 Na m na-baptizim ezinụlọ Stephanus. Ndị ọzọ karịa ndị a, M adịghị echeta ma ọ bụrụ na m mere baptizim ọ bụla ndị ọzọ.
1:17 N'ihi na Kraist eziteghm m ka m mee baptizim, ma-agbasa ozi ọma: ọ bụghị site na amamihe nke okwu, ka aghara ime ka obe Kraist aghọ efu.
1:18 N'ihi na okwu nke obe N'ezie nzuzu ndị na-ala n'iyi. Ma ndị a zọpụtawo, nke ahụ bụ, anyị, ọ bụ ike nke Chineke.
1:19 N'ihi na a dere: "M ga-ala n'iyi amamihe nke ndị maara ihe, na m ga-ajụ nghọta nke onye dị akọ. "
1:20 Olee ebe ndị maara ihe? Olee ebe ndị odeakwụkwọ? Olee ebe ndị na-achọ eziokwu nke afọ? Adịghị Chineke mere ka amamihe nke ụwa a ghọ ihe-nzuzu?
1:21 N'ihi na ụwa amaghị Chineke site amamihe, ya mere, na amamihe nke Chineke, ọ dị mma n'anya Chineke na imezu nzọpụta nke ndị kwere ekwe, site nzuzu nke nkwusa anyị.
1:22 N'ihi na ndị Juu na-arịọ maka ihe ịrịba ama, na ndi-Grik na-achọ amamihe.
1:23 Ma anyị na-ekwusa Kraịst kpogidere. N'ezie, ndị Juu, nke a bụ a asịrị, na ndị mba ọzọ, nke a bụ ihe nzuzu.
1:24 Ma na-adịrị ndị a na-akpọ, Juu na ndị Grik, Kraịst bụ n'onye ahụ nke Chineke na amamihe nke Chineke.
1:25 N'ihi na ihe a na-nzuzu ka Chineke na-ewere amamihe ndị mmadụ, a na nke ahụ adịghị ike Chineke a na-ewere ike site ikom.
1:26 Ya mere, na-elekọta gị ịrụ ọrụ, ụmụnna. N'ihi na ọ bụghị ọtụtụ ndị maara ihe dị ka anụ ahụ, ọ bụghị ọtụtụ ndị dị ike, ọ bụghị ọtụtụ ndị magburu.
1:27 Ma Chineke m họọrọ ihe nzuzu nke ụwa, ka o wee ihere ndi mara ihe. Na Chineke họọrọ ndị na-adịghị ike nke ụwa, ka o wee ihere nke dị ike.
1:28 Na Chineke họọrọ ndị ignoble na a kpọrọ ihe efu nke ụwa, ndị na-ihe ọ bụla, ka o wee belata ka ihe ọ bụla ndị na-ihe.
1:29 Ya mere,, ihe ọ bụla nke na-anụ ahụ ghara inya n'anya-ya.
1:30 Ma ị bụ nke ya na Kraịst Jizọs, onye e mere site na Chineke na-anyị amamihe na ikpe ziri ezi na ịdị nsọ na mgbapụta.
1:31 Ya mere, ke otu ụzọ, e dere,: "Onye ọ bụla ebube, ghara inya n'ime Onyenwe anyị. "
2:1 Ya mere, ụmụnna, mgbe m bịakwutere gị, ezikwa unu ihe àmà nke onye Christ, M na-eme ka elu okwu ma ọ bụ dị elu amamihe.
2:2 N'ihi na m na-ekpe ikpe onwe m ama ihe ọ bụla n'etiti unu, ma e wezụga Jizọs Kraịst, na ya kpogidere.
2:3 Na mụ na unu n'adịghị ike, na-atụ egwu, na n'oké ịma jijiji.
2:4 Na ihe m kwuru na-ekwusa ozi ọma abụghị kwenye okwu nke amamihe mmadụ, ma bụ ngosipụta nke Mmụọ Nsọ na nke omume ọma,
2:5 nke mere na okwukwe gị na-enweghị ike dabere na amamihe nke ndị ikom, ma na n'onye ahụ nke Chineke.
2:6 Ugbu a, anyị na-ekwupụta amamihe n'etiti ndị zuru okè, ma n'ezie, nke a abụghị amamihe nke afọ, ma ọ bụ na ndị ndú nke a na afọ, nke a ga-ebelata ka ihe ọ bụla.
2:7 Kama, anyị na-ekwu nke amamihe nke Chineke na a omimi nke e zoro ezo, nke Chineke kpebirila tupu a na afọ maka ebube anyị,
2:8 ihe na ọ dịghị nke ndị ndú nke ụwa a mara. N'ihi na ọ bụrụ na ha maara ya, na ha agaraghị kpogidere Chineke nke ebube.
2:9 Ma, nke a dị nnọọ ka ọ na-e dere: "The anya na-ahụghị, na ntị anụbeghịkwa, ma ọ bụ ka ọ banyere n'ime obi mmadụ, ihe ihe Chineke kwadebeere ndị hụrụ ya n'anya. "
2:10 Ma Chineke ekpughewo ihe ndị a ka anyị site n'aka Mọ-. N'ihi na Mmụọ na-enyocha ihe niile, ọbụna di omimi nke Chineke.
2:11 Na onye nwere ike ịma ihe ndị na-nke a nwoke, ma e wezụga mmụọ nke bụ n'ime onye ahụ? Ya mere, nakwa, ọ dịghị onye maara ihe nke Chineke, ma e wezụga Mọ nke Chineke.
2:12 Ma, anyị adịghị natara mmụọ nke ụwa a, ma mmụọ bụ onye nke Chineke, nke mere na anyị nwere ike ịghọta na ihe ahụ e nyere anyị site na Chineke.
2:13 Na anyị na-na-na-na-ekwu okwu n'ime ihe ndị a, bụghị na mụtara okwu amamihe mmadụ, ma na ozizi nke Mmụọ, eweta ime mmụọ ihe ọnụ na ime mmụọ ihe.
2:14 Ma na anụmanụ odidi nke madu anaghị aghọta ihe ndị a ka ndị nke Mọ nke Chineke. N'ihi na ọ bụ bụụrụ ya ihe nzuzu, na ọ gaghị enwe ike ịghọta ya, n'ihi na ọ ga-atụle n'ụzọ ime mmụọ.
2:15 Ma ime mmụọ odidi nke madu na-ekpe ikpe niile ihe, ya onwe ya nwere ike ekpe ikpe site na ọ dịghị mmadụ.
2:16 N'ihi na ònye mara uche nke Jehova, ka o wee kụziere ya ihe? Ma anyị nwere uche nke Kraịst.
3:1 Ya mere, ụmụnna, Enweghị m ike ịgwa unu okwu dị ka ma ọ bụrụ na ndị na-ime mmụọ, kama ka ọ bụrụ ndị na-bụkwanụ soro. N'ihi na ị dị ka ụmụ ọhụrụ na Christ.
3:2 M'we nye unu mmiri ara-aṅụ, ọ bụghị nri siri. N'ihi na unu tụrụ aghọtabeghị. ma n'ezie,, ọbụna ugbu a, unu enweghị ike; n'ihi na ị ka na bụkwanụ soro.
3:3 Na ebe ọ bụ na a ka nwere ekworo na esemokwu n'etiti unu, ị na adịghị bụkwanụ soro, na ọ bụghị gị na-eje ije dị ka onye?
3:4 N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ asị na, "N'ezie, M nke Pọl,"Mgbe ọzọ na-ekwu,, "Abụ m nke Apollo,"Bụ na ị bụghị ikom? Ma gịnị bụ Apollo, na ihe na-Paul?
3:5 Anyị bụ nanị ndị ozi nke onye ị kwerewo, dị nnọọ ka Jehova nyere onye ọ bụla n'ime unu.
3:6 m kụrụ, Apollo mmiri, ma Chineke nyere uto.
3:7 Ya mere, ma ọ bụ onye nāku, ma ọ bụ onye ya mmiri, bụ ihe ọ bụla, kama ọ bụ naanị Chineke, onye na-enye uto.
3:8 Ugbu a, ọ na-kuworo, na ọ na-mmiri, bụ otu. Ma onye ọ bụla ga-anata ya kwesịrị ekwesị ụgwọ ọrụ, dị ka ya ọrụ.
3:9 N'ihi na anyị bụ ndị Chineke na-enyere aka. Unu bụ ndị Chineke cultivation; unu bụ ndị Chineke na-ewu.
3:10 Dị ka amara nke Chineke, nke e nyere m, M tọrọ ntọala dị ka a maara ihe-atụpụta ụkpụrụ ụlọ. Ma ọzọ na-ewuli n'elu ya. Ya mere,, ka onye ọ bụla ịkpachara anya otú ọ na-ewuli n'elu ya.
3:11 N'ihi na ọ dịghị onye nwere ike dina ọ bụla ọzọ na ntọala, n'ọnọdụ na nke a tọrọ, nke bụ Kraịst Jizọs.
3:12 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ewuli a ntọala, ma gold, silver, dị oké ọnụ ahịa na nkume, osisi, e, ma ọ bụ ahịhịa ọka,
3:13 onye nke ọ bụla ọrụ a ga-pụta ìhè. N'ihi na ụbọchị Onyenwe anyị ga-akọkwara ya, n'ihi na ọ ga-ekpughe site ọkụ. Na nke a ọkụ ga-anwale onye nke ọ bụla na-arụ ọrụ, dị ka ihe ụdị ọ bụ.
3:14 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ, nke o wuru n'elu ya, foduru, mgbe ahụ ọ ga-enweta ụgwọ ọrụ.
3:15 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-arụ ọrụ a na-akpọ ọkụ, ọ ga-ata ahụhụ ya ọnwụ, ma ya onwe ya ga-ka a ga-azoputa, ma naanị dị ka ọ bụ site n'ọkụ.
3:16 Na unu amaghị na unu bụ ndị ụlọ nsọ Chineke, na na Mọ nke Chineke ndụ n'ime gị?
3:17 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nke mebiri ụlọ nsọ Chineke, Chineke ga-ebibi ya. N'ihi na ụlọ nsọ Chineke dị nsọ, na ị na-na Temple.
3:18 Ka onye ọ ghọgbuo onwe ya. Ọ bụrụ na onye ọ bụla n'etiti unu yiri ka maara ihe n'oge a, Ka ọ ghọọ onye nzuzu, nke mere na ọ nwere ike ịbụ maara ihe n'ezie.
3:19 N'ihi na amamihe nke ụwa a bụ ihe nzuzu n'ebe Chineke. Na otú ọ na-e dere: "M ga-enwetaghị ndị maara ihe na ha onwe ha na astuteness."
3:20 Na ọzọ: "Jehova maara echiche nke ndị maara ihe, na ha bụ ndị bara uru. "
3:21 Ya mere, Ka onye ebube na ndikom.
3:22 N'ihi na ihe niile bụ nke gị: ma Paul, ma ọ bụ Apollo, ma ọ bụ Sifas, ma ọ bụ n'ụwa, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ọnwụ, ma ọ bụ ugbu, ma ọ bụ n'ọdịnihu. Ee, niile bụ nke gị.
3:23 Ma ị bụ Kraịst, na Kraịst bụ Chineke.
4:1 Ntem, ka nwoke tụlee anyị ịbụ ndị ozi nke Kraist na ozi nke ihe-omimi nke Chineke.
4:2 Ebe a ugbu a, ọ na-achọrọ nke na-eje ozi na onye ọ bụla a hụrụ na-ekwesị ntụkwasị obi.
4:3 Ma mu, ọ bụ otú ahụ a obere ihe na-ekpe ikpe site na gị, ma ọ bụ site na afọ ụmụ mmadụ. Ọ dịghịkwa otú m ga-ekpe ikpe onwe m.
4:4 N'ihi na m nwere ihe ọ bụla na akọ na uche m. Ma adịghị m n'onye ezi omume site na nke a. N'ihi na Jehova bụ Onye na-ekpe ikpe m.
4:5 Ya mere, adịghị ahọrọ na-ekpe ikpe tupu oge, ruo mgbe Jehova alaghachi. Ọ ga-ìhè-ezo ihe nke ọchịchịrị, ọ ga-eme ka ọ pụta ìhè na mkpebi nke obi. Na mgbe ahụ onye ọ bụla ga-enwe otuto site n'aka Chineke.
4:6 Ya mere, ụmụnna, M gosiworo ihe ndị a na onwe m na na Apollo, n'ihi unu, ka unu wee na-amụta, site n'ọnụ anyị, na ọ dịghị onye ga-inflated megide otu onye na onye ọzọ, ọ bụghị gabiga ihe e dere.
4:7 N'ihi na ihe gosiri ọdịiche ị n'ebe ibe? Na ihe i nwere nke ị adịghị natara? Ma ọ bụrụ na ị natara ya, Gịnị mere i ebube, dị ka ma ọ bụrụ na ị bụghị mbọ ọ?
4:8 Ya mere, ugbu a ị na-ejupụta, na ugbu a ị e mere bara ọgaranya, dị ka ma ọ bụrụ na ibu eze hapụ anyị? Ma m ka ya bụrụ na ị ga-ibu eze, nke mere na anyị, kwa, nwere ike ibu eze na ị!
4:9 N'ihi na m na-eche na Chineke na-ahụ wetaara anyị dị ka ndị ikpeazụ Ndịozi, dị ka ndị na-anwụrịrị. N'ihi na anyị e mere n'ime ihe nkiri maka ụwa, na n'ihi na Angels, na n'ihi na ndị ikom.
4:10 Ya mere, anyị bụ ndị nzuzu n'ihi Kraist, ma unu na-nghọta mee Christ? Anyị adịghị ike, ma i nwere ike,? Ị bụ ezigbo ihe, ma anyị bụ ndị ignoble?
4:11 Ọbụna ruo awa ahụ, anyị agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ, na anyị gba ọtọ, ugboro ugboro tie, na anyị bụ ndị na-adịghị akwụsi.
4:12 Na anyị ọrụ, -arụ ọrụ aka anyị. Anyị na-kwutọọ, na otú anyị na-agọzi. Anyị na-ata ahụhụ na-edi mkpagbu.
4:13 Anyị na-bụrụ ọnụ, na otú anyị ji ekpe ekpere. Anyị dị ka ihe mkpofu ndị nke ụwa a, dị ka ebi nke ihe nile, ọbụna ruo ugbu a.
4:14 M na-adịghị ede ihe ndị a iji ihere gị, ma iji dụọ unu ọdụ, dị ka m dearest umu.
4:15 N'ihi na unu nwere ike iri puku andikpep ke Christ, ma ọ bụghị otú ọtụtụ ndị nna. N'ihi na n'ime Kraịst Jizọs, site na Gospel, Enwere m amuwo gi.
4:16 Ya mere, Ana m arịọ gị, ịbụ ndị na-eṅomi m, dị nnọọ ka m nke Kraịst.
4:17 N'ihi nke a, M zigara gị Timothy, onye bụ m dearest nwa, na onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ime Onyenwe anyị. Ọ ga na-echetara gị nke na ụzọ m, nke bụ na Kraịst Jizọs, dị nnọọ ka m na-ezi n'ebe nile, na bụla ụka.
4:18 Ụfọdụ mmadụ na-ebu na-eche echiche na m ga-gaghị alọghachikwute gị.
4:19 Ma m ga-alọghachikwutekwa unu n'oge na-adịghị, ma ọ bụrụ na Jehova dị njikere. Na m ga-atụle, abụghị okwu ndị na-inflated, ma omume.
4:20 N'ihi na alaeze Chineke abụghị na okwu, ma na omume.
4:21 Gịnị ka ị ga na-ahọrọ? M Kwesịrị lọghachikwute gị a mkpanaka, ma ọ bụ na ọrụ ebere na a spirit nke umeala n'obi?
5:1 N'elu ihe niile ọzọ, ya a na-ekwu na e nwere iko n'etiti unu, ọbụna ịkwa iko nke a dị otú ahụ ụdị na-abụghị n'etiti mba, nke mere na onye ga-enwe nwunye nke nna-ya.
5:2 Ma unu na-inflated, na na ị kama e mwute, nke mere na ọ bụkwa ya mere ihe a ga-anapụ ha n'etiti unu.
5:3 N'ezie, ezie na-ejighị na ahu, M ugbu a na mmụọ. N'ihi ya, M ugbua ekpe ikpe, dị ka ma ọ bụrụ na m nọ ugbu a, ya nke mere ihe a.
5:4 Na aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ị na-chikọta mmụọ m, na ike nke Onyenwe anyị Jizọs,
5:5 kpọnye ndị dị otú ahụ a dị ka nke a Setan, n'ihi na mbibi nke anụ ahụ, nke mere na mmụọ nsọ wee zọpụta n'ụbọchị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
5:6 Ọ dịghị mma ka ị na-ekele. Na unu amaghị na ntakịrị ihe iko achịcha na-emerụ dum uka?
5:7 Kpochapu ihe iko achịcha ochie, ka unu wee ghọọ ndị ọhụrụ nri, n'ihi na ị na-ekoghị eko. n'ihi na Kraist, anyị Ngabiga, ugbu a immolated.
5:8 Ya mere, ka anyị eri, bụghị na ihe iko achịcha ochie, bụghị na ihe iko achịcha nke echiche ojoo na ajọ omume, ma na achicha ekoghi-eko bụ izi ezi na eziokwu.
5:9 Dị ka m dere na ị na-akwukwọ: "Unu na-akpakọrịta na-akwa iko,"
5:10 N'ezie, ọ bụghị na-akwa iko nke ụwa a, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ na-apụnara mmadụ, ma ọ bụ na ndị na-ejere ikpere arụsị. Ma ọ bụghị, ị kwesịrị pụọ ụwa a.
5:11 Ma ugbu a, m dere na ị: adịghị akpakọrịta na onye ọ bụla a na-akpọ nwanna ma bụ a na-akwa iko, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ otu ohu na-ekpere arụsị, ma ọ bụ onye nkwutọ, ma ọ bụ mmanya na-egbu, ma ọ bụ a na-apụnara mmadụ. Dị otú ahụ na a otu dị ka a, na-adịghị ọbụna iri nri.
5:12 N'ihi na ihe m na-eme na-ekpe ikpe ndị dị n'èzí? Ma na-adịghị ọbụna na unu onwe unu na-ekpe ikpe ndị nọ n'ime?
5:13 N'ihi na ndị dị n'èzí, Chineke ga-ekpe. Ma-eziga na onye ojo n'ebe onwe-unu.
6:1 Olee otú ọ bụ na onye ọ bụla nke ị, enwe a esemokwu megide ibe, ga-anwa anwa-ekpe ikpe tupu iniquitous, na bụghị n'ihu ndị nsọ?
6:2 Ma ọ bụ na unu amaghị na ndị nsọ na nke a afọ ga-ekpe ikpe ọ? Ma ọ bụrụ na ụwa a ga-ekpe ikpe site na gị, ị na-erughị eru, mgbe ahụ, ikpe ikpe ọbụna kasị nta n'ihe?
6:3 Na unu amaghị na anyị ga-ekpe ndị mmụọ ozi? Olee ihe ndị ọzọ ihe nke a na afọ?
6:4 Ya mere, ma ọ bụrụ na i nwere ihe na-ekpe ikpe banyere nke a afọ, gịnị mere na-ahọpụta ndị na-kasị efu na Church na-ekpe ikpe ndị a ihe!
6:5 Ma m na-ekwu ka ihere ị. Ọ bụ n'ebe ahụ ọ dịghị onye n'etiti unu amamihe zuru oke, ka o wee na-enwe ike-ekpe ikpe n'etiti ụmụnne ya?
6:6 Kama, nwanne asọọ mpi megide nwa-nne-n'ụlọikpe, na nke a tupu-ekwesịghị ntụkwasị obi!
6:7 Ugbu a, e bụ na-ihe iwe n'etiti unu, n'ofè ihe ọ bụla ọzọ, mgbe i nwere ikpe megide onye ọzọ. I kwesịrị anabata mmerụ kama? I kwesịrị ghara ịnagide ịbụ ghọgburu kama?
6:8 Ma ị na-eme merụọ na n'ịghọ aghụghọ ule, na nke a banyere ụmụnna!
6:9 Na unu amaghị na iniquitous agaghị enweta alaeze nke Chineke? Adịghị ahọrọ na-awagharị awagharị. N'ihi na-akwa iko, ma ọ bụ ohu ya nke ikpere arụsị, ma ọ bụ na-akwa iko,
6:10 ma ọ bụ effeminate, ma ọ bụ ụmụ nwoke na-arahụ ụra na ụmụ nwoke, ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ avaricious, ma ọ bụ mmanya na-egbu, ma ọ bụ ndị nkwutọ, ma-adọgbu adọgbu ga-enweta alaeze nke Chineke.
6:11 Na ụfọdụ nke ị dị ka a. Ma ị na-ketara, ma e dowo unu nsọ, ma ị na-agu n'onye ezi omume: niile n'aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na na Mmụọ nke Chineke anyị.
6:12 All bụ ihe iwu kwadoro m, ma ọ bụghị ihe niile bụ expedient. All bụ ihe iwu kwadoro m, ma m ga-ghara chụpụrụ azụ site n'ikike nke onye ọ bụla.
6:13 Food bụ maka afo, na afo bụ maka nri. Ma Chineke ga-ebibi ma afọ ma ihe oriri. Na adịrịghị ịkwa iko, kama n'ihi na Jehova; na Chineke bụ maka ahu.
6:14 N'ezie, Chineke kpọlitere Onyenwe anyị, ọ ga-ekulite anyị ji ike ya.
6:15 Na unu amaghị na ahụ unu bụ akụkụ nke Christ? Ya mere,, ka m ga na a akụkụ nke Kraịst na-eme ka ọ a akụkụ nke a nwaanyị akwụna? Ka ọ ghara ịbụ otú!
6:16 Na unu amaghị na onye ọ bụla na-esonyere a nwaanyị akwụna na-aghọ otu ahụ? "N'ihi na abụọ,"Ka o kwuru, "Ga-adị ka otu anụ ahụ."
6:17 Ma onye ọ bụla a na-esonyere Onyenwe anyị bụ onye mmụọ.
6:18 Gbaaranụ ịkwa iko ọsọ. Ọ bụla mmehie bụla na a nwoke akwaa dị na mpụga nke ahu, ma onye ọ bụla fornicates, mmehie megide ahụ nke ya.
6:19 Ma ọ bụ na unu amaghị na ahụ unu bụ ụlọ nsọ nke Mmụọ Nsọ, onye nọ na ị, onye unu nwere site na Chineke, na na ị bụghị gị onwe gị?
6:20 N'ihi na ị na-zụtara na a oké price. Ekele na-ebu Chineke gị idem.
7:1 N'ihe banyere ihe ndị ahụ i dere m: Ọ dị mma ka nwoke ghara imetu nwanyi aka.
7:2 Ma, n'ihi ịkwa iko, ka nwoke ọ bụla nwee nwunye nke ya, ka nwaanyị ọ bụla nweekwa di nke ya.
7:3 A di kwesịrị imezu ọrụ ya nwunye-ya, na a na nwunye kwesịkwara eme ụdị ihe ahụ n'ebe di ya.
7:4 Ọ bụghị nwunye, ma di, onye nwere ike n'ebe ahu ya. Ma, n'otu aka ahụ, na-, ọ bụghị di, ma nwunye, onye nwere ike n'ebe ozu ya.
7:5 Ya mere, adịghị ida gị ibu ọrụ ibe, ma e wezụga eleghị anya site nkwenye, n'ihi na a obere oge, ka unu wee kpochapụ unu maka ekpere. Ọzọkwa, laghachi ọnụ ọzọ, ghara Setan si anwa unu n'aka ndị gị abstinence.
7:6 Ma m na-ekwu nke a, abughi ka ihe indulgence, ma ọ bụ dị ka a enyere n'iwu.
7:7 N'ihi na m ga-ahọrọ ya ma ọ bụrụ na ị na-niile na-amasị m. Ma onye ọ bụla nwere kwesịrị ekwesị onyinye si n'aka Chineke: otu a, ọzọ na otú.
7:8 Ma asị m na-alụghị di na di ha nwụrụ: Ọ dị mma ka ha, ma ọ bụrụ na ha ga-anọgide na dị ka ha na, dị nnọọ ka m na-m.
7:9 Ma ọ bụrụ na ha nwere ike ghara igbochi onwe ha, ha kwesịrị ịlụ. N'ihi na ọ bụ mma ịlụ di na nwunye, karịa ga-akpọ.
7:10 Ma ndị e sonyere ọlụlụ di na nwunye, ọ bụghị m onye nyere gị iwu, ma Jehova: a nwunye abụghị ikewapụ di ya.
7:11 Ma ọ bụrụ na o kewapụrụ ya, ọ ga-anọgide na-alụghị, ma ọ bụ ike ná mma ya na di ya. Na a di ya ekwesịghị ịgba nwunye ya alụkwaghịm.
7:12 Banyere ndị ọzọ, M na-ekwu, ma Jehova. Ọ bụrụ na nwanna ọ bụla nwere na-ekweghị ekwe na nwunye, na ọ ezi nma ka na-ebi ndụ ya, ọ ghara gbaa ya alụkwaghịm.
7:13 Ma ọ bụrụ na nwaanyị ọ bụla nwere na-ekweghị ekwe na di, o ezi nma ka na-ebi ndụ ya, ọ ghara ịgba alụkwaghịm ya na di ya.
7:14 N'ihi na edowo di nēkweghi ekwe e doro nsọ site na ikwere na nwunye, na-ekweghị ekwe na nwunye e doro nsọ site na di ahụ kwere ekwe. Ma ọ bụghị, gị na ụmụ gị ga-adịghị ọcha, ebe kama na ha dị nsọ.
7:15 Ma ọ bụrụ na-ekweghị ekwe napu apu, yak enye. N'ihi na a na nwanne enweghị ike nọrọ n'okpuru n'agbụ otú a. N'ihi na Chineke kpọrọ anyị ka udo.
7:16 Ma olee otú ị maara, nwunye, ma ị ga-azọpụta di gị? Ma ọ bụ olee otú ị maara, di, ma ị ga-azọpụta nwunye gị?
7:17 Otú ọ dị, ka onye ọ bụla na-eje ije dị nnọọ ka Jehova nyere ya, onye nke ọ bụla dị nnọọ ka Chineke akpọwo ya. Ma si otú ime m na-ezi n'ọgbakọ niile.
7:18 Ọ bụla úgwù onye a kpọrọ? Ka ya na-ekpuchi ya úgwù. Ọ bụla na-ebighị úgwù onye a kpọrọ? Ka ya na-úgwù.
7:19 Ibi úgwù abụghị ihe ọ bụla, ebighị úgwù bụ ihe ọ bụla; e nwere nanị idebe iwu nke Chineke.
7:20 Ka onye ọ bụla na onye ọ bụla na-anọgide na otu ọkpụkpọ nke ọ na-akpọ.
7:21 Ị a orù onye a na-akpọ? Atụla nchegbu banyere ya. Ma ọ bụrụ na ị nwere ikike ịbụ free, eme ka ojiji nke ya.
7:22 N'ihi na ọ bụla orù onye a na-akpọ n'ime Onyenwe anyị bụ free n'ime Onyenwe anyị. N'otu aka ahụ, ọ bụla free onye a na-akpọ bụ a ohu na Christ.
7:23 Ị na e zụtara a price. Atụla njikere ibu ndi-orù ndikom.
7:24 Brothers, ka onye ọ bụla, na ihe ọ bụla ala ọ na-akpọ, anọgide na ala na Chineke.
7:25 Ugbu a, banyere na-amaghị nwoke, M enweghị iwu site n'aka Chineke. Ma m na-enye ndụmọdụ, dị ka onye nwetara ebere nke Chineke, ka onye kwesịrị ntụkwasị obi.
7:26 Ya mere, M na-atụle nke a na-ezi, n'ihi na nke ugbu mkpa: na ọ dị mma ka nwoke na-ndị dị otú ahụ ka m na.
7:27 Ékekọwo gi na nwunye? Na-adịghị achọ ka a tọhapụrụ. Ị free nke a na nwunye? Adịghị na-achọ a na nwunye.
7:28 Ma ọ bụrụ na ị na-a na nwunye, ị emehieghị. Ma ọ bụrụ na a na-amaghị nwoke nke di na nwunye, ọ emehiebeghị. Bụlagodi, dị ka ndị a ga-enwe mkpagbu n'anụ ahụ. Ma m ga-zọọ unu site na nke a.
7:29 Ya mere, nke a bụ ihe m na-ekwu, ụmụnna: The oge ya dị mkpirikpi. Gịnị na-anọgide na ya bụ ndị dị otú ahụ na: ndị nwere nwunye kwesịrị ka ọ bụrụ na ha nwere onye ọ bụla;
7:30 na ndị na-akwa ákwá kwaa ákwá, dị ka ha na-adịghị akwa ákwá; na ndị na-aṅụrị ọṅụ, dị ka ma ọ bụrụ na ha na-adịghị na-aṅụrị ọṅụ; ndị na-azụ, dị ka ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ọ bụla;
7:31 na ndị na-eji ihe nke ụwa a, dị ka ma ọ bụrụ na ha na-adịghị eji ha. N'ihi na ọnụ ọgụgụ ahụ nke ụwa a na-agabiga.
7:32 Ma m ga-ahọrọ ka ị na-enweghị na-echegbu onwe. Onye ọ bụla bụ na-enweghị a na nwunye bụ nchegbu banyere ihe nke Onyenwe anyị, ka otú ọ pụrụ ime Chineke obi ụtọ.
7:33 Ma onye ọ bụla bụ na a na nwunye bụ nchegbu banyere ihe nke ụwa, ka otú ọ pụrụ ime ya na nwunye. Ya mere, o kewara.
7:34 Na onye na-alụghị nwaanyị na-amaghị nwoke na-eche banyere ihe ndị na-nke Jehova, nke mere na o wee dị nsọ na ahu na na mmụọ. Ma ọ bụ onye lụrụ di na nwunye na-eche banyere ihe ndị na-nke ụwa, ka otú ọ pụrụ ime ya na di ya.
7:35 Ọzọkwa, M na-ekwu nke a n'ihi na gị onwe gị uru, bụghị iji igba a ọnyà n'ebe unu, ma n'ebe ihe ọ bụla dị n'eziokwu na ihe ọ bụla nwere ike inye gị na ikike na-enweghị ihe mgbochi, ka ha na-efe Chineke.
7:36 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ewere onwe ya ka o yiri ihere, banyere a na-amaghị nwoke bụ onye nke okenye afọ, n'ihi ya, ọ kwesịrị ịdị na-, o nwere ike ime ka ọ chọrọ. Ọ bụrụ na ọ lụọ nwunye ya, ọ gaghị mmehie.
7:37 Ma ọ bụrụ na o kpebiri ike n'obi ya, na na ọ bụghị ibu ọrụ ọ bụla, ma naanị ike nke ya free uche, na ọ bụrụ na ọ ekpe ikpe a n'obi-ya, ka ya nọgide a na-amaghị nwoke, ọ na-eme nke ọma.
7:38 Ya mere, onye enyekwara na ya na-amaghị nwoke na ọlụlụ di na nwunye na-eme nke ọma, na onye na-adịghị sonyere ya ka mma.
7:39 A kegidere nwanyị n'okpuru iwu ogologo oge ka ya na di ya dị ndụ. Ma ọ bụrụ na di ya nwụrụ, ọ bụ free. Ọ nwere ike ịlụ onye ọ bụla ọ chọrọ, ma naanị n'ime Onyenwe anyị.
7:40 Ma, ọ ga-abụ ihe nāgara, ma ọ bụrụ na ọ na-anọgide na steeti a, kwekọrọ na ndụmọdụ m. Na m na-eche na m, kwa, nwere Mọ nke Chineke.
8:1 Ugbu a banyere ndị na ihe ndị na-chụọrọ arụsị àjà: anyị maara na anyị niile nwere ihe ọmụma. Ọmụma na-afụli elu, ma ọrụ ebere na-ewuli elu.
8:2 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla weere ya ama ihe ọ bụla, ọ dịghị ma mara n'ụzọ o kwesịrị ịma.
8:3 N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ Chineke n'anya, o na-mara site na ya.
8:4 Ma dị ka na ihe oriri na-immolated arụsị, anyị maara na arụsị na ụwa bụ ihe ọ bụla, na na ọ dịghị onye ọ bụ Chineke bụ, ma e wezụga One.
8:5 N'ihi na ọ bụ ezie na e nwere ihe ndị na-akpọ chi, ma ọ bụ n'eluigwe ma ọ bụ n'ụwa, (ma ọ bụrụ na onye na-ewere ọbụna na e nwere onye ọtụtụ chi na otutu ndi nenwe)
8:6 ma anyị maara na e nwere naanị otu Chineke, Nna, si onye ihe niile na-, na na onye anyị na-, na otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, site onye ihe niile na-, na site na onye anyị na-.
8:7 Ma ihe ọmụma bụ na onye ọ bụla. N'ihi na ụfọdụ mmadụ, ọbụna ugbu a, na nkwenye arụsị, iri ihe e ji chụọ àjà ka arụsị. Na akọ na uche ha, ịbụ-adịkwaghị ike, na-aghọ rụrụ arụ.
8:8 Ma nri anaghị aja anyị mma Chineke. N'ihi na ọ bụrụ na anyị na-eri, anyị ga-enweghị ọzọ, na ọ bụrụ na anyị erighị, anyị ga-enweghị obere.
8:9 Ma-akpachara anya ka ihe gị nnwere onwe na-a na-akpata mmehie ndị na-adịghị ike.
8:10 N'ihi na ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ahụ onye na ihe ọmụma ọdụ ala iri na ikpere arụsị, agaghị akọ na uche ya, ịbụ-adịkwaghị ike, enwe anyaike na-eri ihe e ji chụọrọ arụsị àjà?
8:11 Na kwesịrị-adịghị nwanne ala n'iyi site gị ihe ọmụma, ọ bụ ezie na Kraịst nwụrụ maka ya?
8:12 Ya mere, mgbe ị na-emehie n'ụzọ dị otú a megide ụmụnna, ị emerụ ha adịghị ike akọ na uche, mgbe ahụ ị mehie megide Christ.
8:13 N'ihi nke a, ma ọ bụrụ na nri na-eduga ná nwanne m nwoke na-emehie, M ga-eri anụ, ka m'we ghara iduga nwanne m nwoke na-emehie.
9:1 M bụghị free? Àbughi m onye-Apostle? Ndi mmenịm Kraịst Jizọs Onyenwe anyị? Ị abụghị ọrụ m n'ime Onyenwe anyị?
9:2 Ma ọ bụrụ na m na-Onyeozi ndị ọzọ, ma ka m na-ị. N'ihi na unu bụ akara nke m onyeozi n'ime Onyenwe anyị.
9:3 My-agbachitere ha na ndị ajụ m ajụjụ bụ nke a:
9:4 Ọ bụ na anyị enweghị ikike iri ihe na iṅu?
9:5 Ọ bụ na anyị enweghị ikike ime njem gburugburu na a nwaanyị nke bụ a nwanne, dị nnọọ ka ime ndịozi ndị ọzọ, na ụmụnna nke Jehova, na Kifas?
9:6 Ka ọ bụ naanị onwe m na Banabas na-adịghị enwe na ikike ime ihe n'ụzọ dị otú a?
9:7 Ònye mgbe na-eje ozi dị ka onye agha na-akwụ ụgwọ ya stipend? Ònye kuworo ubi-vine na-adịghị eri si emepụta? Ònye ịta ahịhịa a ìgwè ewu na atụrụ anaghị aṅụ mmiri ara nke ewu na atụrụ?
9:8 M na-ekwu ihe ndị a dị ka nwoke? Ma ọ bụ ka iwu kwa ekwu ihe ndị a?
9:9 N'ihi na e dere na iwu nke Moses: "Ị gaghị gēke n'ọnụ ehi, mgbe ọ na-azọcha ọka. "Chineke ebe a na-echebara ehi?
9:10 Ọ bụ na ọ na-asị na nke a, n'ezie, maka anyị n'ihi? E dere ihe ndị kpọmkwem maka anyị, n'ihi na ọ na-akọ ubi, kwesịrị ịkọ ubi ma nwee olileanya, na onye na-azọchakwa mkpụrụ, kwa, na olileanya nke inweta mkpụrụ.
9:11 Ọ bụrụ na anyị na-kụrụ ihe ime mmụọ gị, dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị na ubi gị ụwa ihe?
9:12 Ọ bụrụ na ndị ọzọ na-ekere òkè nke a isi, ị, mere bụ na anyị adịghị ọzọ isiokwu? Ma anyị na-eji ikike a. Kama, anyị na-eburu ihe niile, ka anyị wee ghara inye ọ bụla mgbochi ahụ Gospel of Christ.
9:13 Na unu amaghị na ndị na-arụ ọrụ n'ebe nsọ eri ihe ndị na-ebe nsọ, na na ndị na-eje ozi na ebe ịchụàjà na-eso ebe ịchụàjà?
9:14 Ya mere, kwa, ka Chineke họpụtara na ndị na-akpọsa Gospel kwesịrị ibi ndụ site Gospel.
9:15 Ma m na-eji onye ọ bụla nke ihe ndị a. Na m na-e dere na ihe ndị a pụrụ ime m. N'ihi na ọ dị mma ka m na-anwụ anwụ, kama ka onye ọ bụla w ebube m.
9:16 N'ihi na ọ bụrụ na m na-ekwusa ozi oma, ọ bụghị otuto m. N'ihi na ibu ọrụ e boro m. Ma ahuhu m, ma ọ bụrụ na m na-adịghị ikwusa ozioma.
9:17 N'ihi na ọ bụrụ na m na-eme nke a ji obi ha, M nwere a ụgwọ ọrụ. Ma ọ bụrụ na m na-eme nke a ekweghiekwe, a dispensation e nyere ikike m.
9:18 na ihe, mgbe ahụ, ga-abụ ụgwọ ọrụ m? Ya mere, mgbe ozi oma, M ga-enyekwa ndị Gospel enweghị na-ewere, ka m wee ghara eme iberiibe m ikike na Gospel.
9:19 N'ihi na mgbe m bụ free nwoke nile, M mere onwe m, bú orù nile, ka m wee nwee ike inweta ihe ọzọ.
9:20 Ya mere, ndị Juu, M ghọrọ ka a Jew, ka m wee rite ndị na-Ju.
9:21 Ndị na-n'okpuru iwu, M ka ọ bụrụ na m nọ n'okpuru iwu, (ezie na m na ọ bụghị n'okpuru iwu) ka m wee nweta ndị nọ n'okpuru iwu. Iji ndị ndị na-enweghị iwu, M ka ọ bụrụ na m na ndị na-enweghị iwu, (ezie na m na-enweghị iwu Chineke, ịbụ na iwu nke Kraịst) ka m wee nweta ndị na-enweghị iwu.
9:22 Ka na-adịghị ike, M ghọrọ adịghị ike, ka m wee rite ndị na-adịghị ike. niile, M ghọrọ nile, ka m wee chekwaa niile.
9:23 Na m na-eme ihe niile n'ihi ozi oma, ka m wee ghọọ ya na onye òtù ọlụlụ.
9:24 Na unu amaghị na, nke ndị na-agba ọsọ n'ebe ọsọ,, ha niile, na-, bụ ọgba ọsọ, ma naanị otu onye ka oji ihe nrite. N'otu aka ahụ, ị ga na-agba ọsọ, ka unu wee nweta.
9:25 Na onye na mpi na a zoo abstains si ihe nile. Na ha na-eme nke a, n'ezie, ka ha we nweta a pụrụ ire ure okpueze. Ma anyị na-eme nke a, ka anyị wee nweta ihe apụghị ire ure.
9:26 N'ihi ya, m na-agba ọsọ, ma ọ bụghị ihe edoghị ha anya. Na otú ahụ ka m na-alụ ọgụ, ma ọ bụghị site flailing na ikuku.
9:27 Kama, M apịa ahụ m, ka redirect ya n'ime n'agbụ. Ma ọ bụghị, M nwere ike ndị ọzọ ozi ọma, ma ghọọ onye a jụrụ ajụ onwe m.
1 Ndị Kọrịnt 10
10:1 N'ihi na m na-achọghị ka unu ghara ịma, ụmụnna, na nna nna anyị hà niile nọrọ n'okpuru ígwé ojii, na ha niile wee n'ofe oké osimiri.
10:2 Na na Moses, ha niile ndị e mere baptizim, na ígwé ojii na nke oké osimiri,.
10:3 Ha niile wee rie nke otu nri ime mmụọ na.
10:4 Ha niile wee ṅụọ nke otu mmiri ime mmụọ. Ya mere, ha niile na-aṅụ nke n'oké nkume ime mmụọ na-achọ iji nweta ha; na na oké nkume bụ Kraịst.
10:5 Ma ọtụtụ n'ime ha, Chineke abụghị na-amasị. N'ihi na ha gburu na desert.
10:6 Ma ihe ndị a na-eme dị ka ihe nlereanya anyị, nke mere na anyị nwere ike ọ gaghị achọ ihe ọjọọ, dị nnọọ ka ha chọrọ.
10:7 Ya mere, na-adịghị-akụkụ na-ekpere arụsị, dị ka ụfọdụ n'ime ha mere, dị nnọọ ka e dere: "Ndị Izrel nọdụrụ ala iri ihe na iṅu ihe, na mgbe ahụ, ha we bilie ito ochi onwe ha. "
10:8 Na ka anyị ghara ịkwa iko, dị ka ụfọdụ n'ime ha fornicated, na iri-na-atọ na puku da otu ụbọchị.
10:9 Ka anyị Anwala Christ, dị ka ụfọdụ n'ime ha nwaa, ha wee laa n'iyi agwọ.
10:10 Na ị na-ekwesịghị ịtamu ntamu, dị ka ụfọdụ n'ime ha tamuru, ha wee laa n'iyi site mbibi.
10:11 Ugbu a niile ihe ndị a mere ka ha dị ka ihe atụ, na otú ha na e dere iji nye anyị mgbazi, n'ihi na nke ikpeazụ afọ ejidela anyị.
10:12 Ya mere, onye ọ bula nke weere ya ka guzo, ka ya ịkpachara anya ịghara ịda.
10:13 Ọnwụnwa na-ekwesịghị ijide gị, ma e wezụga ihe dị ụmụ mmadụ. N'ihi na Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, na ọ ga-ekwe ka i a nwaa unu gabiga gị ike. Kama, ọ ga-eme ya Providence, ọbụna n'oge ọnwụnwa, nke mere na ị ga-enwe ike idi ya.
10:14 N'ihi nke a, kasị hụrụ n'anya nke m, gbanahụ ofufe arụsị.
10:15 Ebe ọ bụ na m na-ekwu na ndị na-akọ, ikpe ihe m na-ekwu n'onwe unu.
10:16 The cup of benediction na anyị na-agọzi, ọ bụghị a udo na Blood of Christ? Na achịcha nke anyị na-anyawa, ọ bụghị a na-ekere òkè Isi nke Jehova?
10:17 Site na otu nri, anyị, ezie na ọtụtụ, bụ otu ahụ: anyị nile bụ ndị na-nketa nke otu nri.
10:18 Tụlee Israel, dị ka anụ ahụ. Ọ bụ na ndị na-eri site na àjà ndị nketa nke ebe ịchụàjà?
10:19 Gịnị bụ ọzọ? M Kwesịrị-asị na ihe a na immolated arụsị nwere ihe ọ bụ? Ma ọ bụ na arụsị nwere ihe ọ?
10:20 Ma ihe na ndị Jentaịl immolate, ha immolate mmụọ ọjọọ, na ọ bụghị Chineke. Na m na-adịghị achọ ka ị na ndị nketa na ndị mmụọ ọjọọ.
10:21 Ị gaghị na-aṅụ iko nke Onyenwe anyị, na iko ndị mmụọ ọjọọ. Ị nwere ike ịbụ ndị nketa nke table nke Jehova, na nketa nke tebụl ndị mmụọ ọjọọ.
10:22 Ma ọ bụ anyị kwesịrị akpasu Chineke ekworo? Ọ bụ na anyị siri ike karịa ya? All bụ ihe iwu kwadoro m, ma ọ bụghị ihe niile bụ expedient.
10:23 All bụ ihe iwu kwadoro m, ma ọ bụghị ihe niile na-ewuli elu.
10:24 Ka onye ọ bụla na-achọ onwe ya, ma n'ihi na ndị ọzọ.
10:25 Ihe ọ bụla na-ere n'ahịa, I nwere ike iri, enweghị na-arịọ ajụjụ n'ihi akọ na uche.
10:26 "The ụwa na ihe niile jupụtara n'ime ya bụ nke Jehova."
10:27 Ọ bụrụ na ị na-kpọrọ site ọ bụla na-ekweghị ekwe, na ị dị njikere ịga, I nwere ike iri ihe ọ bụla e debere n'ihu gị, enweghị na-arịọ ajụjụ n'ihi akọ na uche.
10:28 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu,, "Nke a ka chụọrọ arụsị àjà,"Adịghị eri ya, n'ihi onye ahu nke gosiri na ị na, na n'ihi akọ na uche.
10:29 Ma m na-ekwu okwu ya bụ akọ na uche nke onye nke ọzọ, ghara gị. N'ihi na ihe mere m ga-nnwere onwe-ekpe ikpe site akọnuche ndị ọzọ?
10:30 Ọ bụrụ na m na-eri na inye ekele, mere ka m ga-ekwutọ n'elu na nke m na-enye ekele?
10:31 Ya mere, ma ị na-eri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ i nwere ike ime, eme ihe niile n'ihi na ebube Chineke.
10:32 Ihe na-enweghị iwe ele ndị Juu, na n'ebe ndị mba ọzọ, na n'ebe Church nke Chineke,
10:33 dị nnọọ ka m na-, n'ihe niile, biko onye ọ bụla, bụghị na-achọ ihe kasị mma maka onwe m, ma ihe kasị mma maka ọtụtụ ndị ọzọ, nke mere na ha nwere ike a ga-azoputa.
11:1 -Abụ na-eṅomi m, ka mu onwem bu kwa nke Kraist.
11:2 Ugbu a, m na-eto gị, ụmụnna, n'ihi na ị bụ echeta m na ihe niile, n'ụzọ dị otú ahụ dị ka jide m n'iwu dị ka enyefewokwa m ha ala ị.
11:3 N'ihi ya, m chọrọ ka ị mara na isi nke nwoke ọ bụla bụ Kraịst. Ma isi nke nwanyị bụ nwoke. Ma n'ezie, isi nke Kraịst ahụ bụ Chineke.
11:4 Nwoke ọ bula na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma na isi-ya kpuchie disgraces isi ya.
11:5 Ma nwaanyị ọ bụla na-ekpe ekpere ma ọ bụ na-ebu amụma na isi ya agaghị kpuchie disgraces isi ya. N'ihi na ọ bụ otu ihe ahụ dị ka ma ọ bụrụ na isi ya bu akpụchasị.
11:6 Ya mere ọ bụrụ na nwaanyị abụghị veiled, ka ntutu isi ya, agēbipu. n'ezie mgbe, ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ihere ka a nwaanyị nwere ntutu isi ya bipu, ma ọ bụ inwe isi ya akpụchasị, mgbe ọ kwesịrị ikpuchi isi ya.
11:7 N'ezie, a nwoke ekwesịghị ikpuchi isi ya, n'ihi na ọ bụ onyinyo na otuto nke Chineke. Ma nwaanyị bụ ebube nwoke.
11:8 N'ihi na mmadụ abụghị nke nwanyị, ma nwaanyị bụ nke mmadụ.
11:9 ma n'ezie,, nwoke e kere nwaanyị, ma nwaanyị e kere mmadụ.
11:10 Ya mere, a Nwanyị kwesịrị inwe ihe àmà nke ikike n'isi ya, n'ihi ndị mmụọ ozi.
11:11 Ma n'ezie, nwoke ga-adị na-enweghị nwaanyị, ma ọ ga-nwaanyị adị enweghị nwoke, n'ime Onyenwe anyị.
11:12 N'ihi na dị ka nwaanyị ẹkedidu si nwoke, otú a kwa ka mmadụ adị site nwaanyị. Ma ihe nile si na Chineke.
11:13 Ikpe onwe unu. Bụ na o kwesịrị ekwesị ka a nwaanyị-ekpe ekpere ka Chineke kpughere?
11:14 -Adịghị agwa onwe ya na-akụziri gị na, n'ezie, ma ọ bụrụ na a mmadụ na-amụba ya ntutu isi ogologo, ọ bụ a ihere ya?
11:15 Ma n'ezie, ma ọ bụrụ na a nwaanyị na-eto ya na ntutu isi ogologo, ọ bụ a ebube maka ya, n'ihi na ntutu isi ya e nyere ya dị ka a kpuchie.
11:16 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere a uche na-ese, anyị enweghị ndị dị otú ahụ omenala, adịghịkwa na Church nke Chineke.
11:17 Ugbu a, m adọ aka ná ntị na ị na, enweghị eto, banyere nke a: na ị na-ezukọ ọnụ, na bụghị n'ihi na mma, ma n'ihi na njọ.
11:18 Na mbụ, n'ezie, M na-anụ na mgbe ị na-ezukọta ọnụ na chọọchị, e nwere esemokwu n'etiti unu. Na m kwere nke a, na akụkụ.
11:19 N'ihi na-aghaghị ịdị na ozizi nduhie, nke mere na ndị a nwalere nwere ike pụta ìhè n'etiti unu.
11:20 Ya mere, mgbe ị na-ezukọta ọnụ dị ka otu, ọ bụ agaghịkwa iji eri Nri Anyasị nke Onyenwe.
11:21 N'ihi na onye ọ bụla ụzọ na-ewe ya na nri abalị nwunye na-eri. Na dị ka a n'ihi, otu onye agụụ na-agụ, mgbe ọzọ bụ mmanya na-egbu.
11:22 Ị enweghị ụlọ, nke na-eri ihe ma na-aṅụ? Ma ọ bụ ị nwere ndị dị otú nlelị maka Church nke Chineke na ị ga-ihere ndị na-adịghị otú ahụ nlelị? Gịnị ka m kwesịrị asị unu? M Kwesịrị eto gị? M na-adịghị na-eto ị na nke a.
11:23 N'ihi na mu onwem natara n'aka Onyenwe anyị ihe m nyefere gị: na Onyenwe anyị Jizọs, n'otu abalị ahụ na ọ na-enyefe, ama achịcha,
11:24 ma na-enye ekele, ọ nyawara ya, na kwuru: "Were rie. Nke a bụ ahụ m, nke ga-enye ya maka unu. Ndi a na-echeta m. "
11:25 N'otu aka ahụ na-, iko, mgbe o riri nri anyasị, si: "Iko a bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ na ọbara. -eme nke a, dị ka mgbe ị na-aṅụ ya, na-echeta m. "
11:26 N'ihi na mgbe ọ bụla ị na-eri achịcha a ma na-aṅụ iko a, ị na-ekwusa ọnwụ Onyenwe anyị, ruo mgbe ọ na-alaghachi.
11:27 Ya mere, onye ọ bụla nke na-eri achịcha a, ma ọ bụ na-aṅụ si iko nke Onyenwe anyị, n'erughị eru, ga-atụba nke ahụ na ọbara nke Onye-nwe.
11:28 Ma ka madu nwaputa onwe-ya, na, n'ụzọ nke a, ya rie si na nri, na-aṅụ mmiri na cup.
11:29 N'ihi na onye na-eri na ọṅụṅụ n'erughị eru, eri ma na-aṅụ a ikpe megide onwe-ya, bụghị ịghọta na ọ ga-ahụ nke Jehova.
11:30 N'ihi ya, ọtụtụ ndị na-adịghị ike na-arịa ọrịa n'etiti unu, na ọtụtụ ndị dara n'ụra.
11:31 Ma ọ bụrụ na anyị onwe anyị na-nghọta, mgbe na-anyị na-agaghị ekpe ikpe.
11:32 Ma mgbe anyị na-ekpe ikpe, anyị na-na-gbaziri Jehova, ka anyị wee ghara ikpe na ụwa a.
11:33 Ya mere, ụmụnna m, mgbe ị na-ezukọta ọnụ na-eri, ichebara ibe.
11:34 Ọ bụrụ na onye ọ bụla agụụ na-agụ, ka ya rie ihe n'ụlọ, ka unu wee na-ezukọta ọnụ si ikpe. Ma ihe ndị ọzọ, M ga-emekwa ka ya n'usoro mgbe m bịarutere.
12:1 Ugbu a banyere ihe ime mmụọ ihe, Achọghị m ka unu ghara ịma, ụmụnna.
12:2 Ị maara na mgbe ị bụ mba, ị gakwuuru ogbi arụsị, na-eme ihe ị na-ada ime.
12:3 N'ihi nke a, M ka unu mara na ọ dịghị onye na-ekwu okwu na Mọ nke Chineke na-ekwu a bụrụ ọnụ megide Jesus. Ma ọ dighi onye ọ bula puru ikwu na Jizọs bụ Onyenwe, ma e wezụga na nke Mmụọ Nsọ.
12:4 N'ezie, e nwere iche iche graces, ma otu Mmụọ.
12:5 Na e nwere iche iche ministri, ma otu Onyenwe.
12:6 Na e nwere iche iche ọrụ, ma otu Chineke, na-arụ ọrụ niile dị onye ọ bụla.
12:7 Otú ọ dị, mpụta ìhè nke Mmụọ e nyere onye ọ bụla n'ime n'ebe ihe bara uru.
12:8 N'ezie, otu, site na Mọ Nsọ, e nyere okwu amamihe; ma ọzọ, dị ka otu Mmụọ, okwu nke ihe ọmụma;
12:9 ọzọ, na otu Mmụọ, okwukwe; ọzọ, na otu Mmụọ, onyinye nke na-agwọ ọrịa;
12:10 ọzọ, ọrụ ebube; ọzọ, amụma; ọzọ, na nghọta nke mmụọ; ọzọ, iche iche iche iche nke asụsụ; ọzọ, nkọwa okwu.
12:11 Ma, otu na otu Mmụọ na-arụ ọrụ na ihe a niile, ekesa onye ọ bụla dị ka uche ya.
12:12 N'ihi na dị nnọọ ka ahụ ahụ bụ otu, ma nwere ọtụtụ akụkụ, otú akụkụ ahụ niile nke ahụ ahụ, n'agbanyeghị na ha dị ọtụtụ, bụ nanị otu ahụ. Otú a kwa bụ Kraịst.
12:13 ma n'ezie,, na otu Mmụọ, anyị nọ na-niile baptizim n'ime otu ahụ, ma ndị Juu ma ọ bụ mba ọzọ, ma orù ma ọ bụ free. Na anyị niile ṅụọ ihe ọṅụṅụ na otu Mmụọ.
12:14 Maka ahu, kwa, abụghị otu akụkụ, ma ọtụtụ.
12:15 Ọ bụrụ na ụkwụ asị, "N'ihi na abụghị m aka, Adịghị m ahụ,"Ọ ga-ahụ na-enwe ahụ?
12:16 Ma ọ bụrụ na ntị asị, "N'ihi na abụghị m anya, Adịghị m ahụ,"Ọ ga-ahụ na-enwe ahụ?
12:17 Ọ bụrụ na aru dum bu anya, otú ọ ga-anụ? Ọ bụrụ na ndị dum na-anụ ihe, otú ọ ga-esi isi?
12:18 Ma kama, Chineke etinyela akụkụ, onye ọ bụla n'ime ha, na ahu, dị nnọọ ka ọ ya mma.
12:19 Ya mere ọ bụrụ na ha nile otu akụkụ, otú ọ ga-adị a aru?
12:20 Ma kama, e nwere ọtụtụ akụkụ, n'ezie, ma otu ahụ.
12:21 Na anya nwere ike ikwu na aka, "M na-adịghị mkpa maka ọrụ gị." Ma ọzọ, isi ike ikwu na ụkwụ, "Ị bụ nke adịghị eji na m."
12:22 N'ezie, ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa bụ ndị na akụkụ ahụ nke yiri ka ọgwụgwụ.
12:23 Ma ọ bụ ezie na anyị tụlee akụkụ ụfọdụ nke ahụ na-na-erughị magburu, anyị gburugburu ndị a ka ukwuu ùgwù, ya mere, ndị na-akụkụ nke ndị na-erughị adị ọgwụgwụ elu ka ukwuu ùgwù.
12:24 Otú ọ dị, anyị adị akụkụ enweghị ndị dị otú ahụ mkpa, ebe Chineke n'obi ahụ ọnụ, kesaara nsọpụrụ ka ukwuu ka na nke nwere mkpa,
12:25 nke mere na e nwere ike inwe dịghị ubahade ke idem, ma kama nke akụkụ onwe ha nwere ike na-elekọta ibe.
12:26 Ya mere, ma ọ bụrụ na otu akụkụ na-enwe ihe ọ bụla, akụkụ ahụ niile na-ata ahụhụ na ya. Ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na otu akụkụ okụt ebube, akụkụ ahụ niile na-aṅụrị ọṅụ na ya.
12:27 Ugbu a, i bu aru nke Kraist, na akụkụ ka ọ bụla akụkụ.
12:28 ma n'ezie,, Chineke ga-eru iji na Church: mbụ Ndịozi, nke abụọ Amụma, -atọ Teachers, ọzọ ọrụ ebube-ọrụ, na mgbe ahụ na amara nke na-agwọ ọrịa, nke inyere ndị ọzọ aka, nke governing, iche iche iche iche na-asụ asụsụ, na nke isughari okwu.
12:29 Niile bụ Ndịozi? Niile bụ ndị amụma kụziri? Niile bụ Teachers?
12:30 Bụ nile nalu olu? Unu niile nwere amara nke na-agwọ ọrịa? Ime ihe nile kwue okwu? Unu niile ịkọwa?
12:31 Ma-anụ ọkụ n'obi ka mma charisms. M na-ekpughe unu a, ma ndị ọzọ ụzọ magburu onwe.
13:1 Ọ bụrụ na m na-ekwu okwu na asụsụ nke ndị ikom, ma ọ bụ nke ndị mmụọ ozi, ma ọ bụghị nwere ọrụ ebere, M ga-adị ka a clanging mgbịrịgba ma ọ bụ a n'iyi cymbal.
13:2 Ma ọ bụrụ na m nwere amụma, na-amụta ọ bụla omimi, na inweta ihe ọmụma nile, na nwere okwukwe niile, nke mere na m nwere ike ịkpali ugwu, ma ọ bụghị nwere ọrụ ebere, mgbe ọ dịghị ihe m.
13:3 Ma ọ bụrụ na m na-ekesa ihe niile m ngwongwo iji na-eri nri ndị ogbenye, na ọ bụrụ na mụ enyefee ahụ m ga-akpọ, ma ọ bụghị nwere ọrụ ebere, ọ na-enye m ihe ọ bụla.
13:4 Charity bụ ọrịa, bụ ụdị. Charity anaghị anyaụfụ, eme ihe eboro, na-adịghị inflated.
13:5 Charity nweghị oké ọchịchọ, anaghị achọ onwe ya, na-adịghị kpasue iwe, necheputagh ihe ọjọ ọ.
13:6 Charity dịghị aṅụrịrị ajọ omume, ma na-aṅụrị ọṅụ na eziokwu.
13:7 Charity enwe niile, ekwere ihe nile, na-enwe olileanya ihe niile, adịru niile.
13:8 Charity mgbe efopụ, ọbụna ma ọ bụrụ amụma agabiga, ma ọ bụ asụsụ kwusi, ma ọ bụ ihe ọmụma na-ebibi.
13:9 N'ihi na anyị maara na na akụkụ, na anyị na-ebu amụma na na akụkụ.
13:10 Ma mgbe zuru okè abịarute, na-ezughị okè ga-agabiga.
13:11 Mgbe m bụ nwa, M okwu ka a na nwa, M ghọtara ihe dị ka a na nwa, M chere na dị ka a na nwa. Ma mgbe m ghọrọ nwoke, M na-etinye onwe ihe nke a na nwa.
13:12 Ugbu a anyị na-ahụ site na a iko darkly. Ma mgbe ahụ, anyị ga-ahụ ihu na ihu. Ugbu a, m maara na akụkụ, ma mgbe ahụ, m ga-amarakwa, ọbụna dị ka m mara.
13:13 Ma n'ihi na ugbu a, atọ ndị a anọgide na-: okwukwe, olileanya, na ebere. Na nke kasị n'ime ha bụ ọrụ ebere.
14:1 achụsonụ ọrụ ebere. -Anụ ọkụ n'obi maka ihe ime mmụọ, ma naanị ka ị na-ebu amụma.
14:2 N'ihi na onye na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche, ekwu na ọ bụghị ka ndị ikom, ma Chineke. N'ihi na ọ dịghị onye na-aghọta. Ma site na Mọ Nsọ, ọ na-ekwu ihe omimi.
14:3 Ma onye ọ bụla na-ebu amụma na-ekwu okwu ndị mmadụ nọ maka edification na agbamume na nkasi obi.
14:4 Onye ọ bụla na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche edifies onwe ya. Ma onye ọ bụla na-ebu amụma edifies na Church.
14:5 Ugbu a, m chọrọ ka ị niile ka ha kwue okwu, ma ihe ndị ọzọ mere ka amuma. N'ihi na onye na-ebu amụma ka ya ukwuu na-ekwu okwu n'asụsụ nke, ma eleghị anya ọ na-akọwara, nke mere na Church nwere ike inweta edification.
14:6 Ma ugbu a,, ụmụnna, ọ bụrụ na m na-abịa gị na-ekwu okwu n'asụsụ nke, otú ọ ga-abara gị uru, ma kama m na-ekwu ka ị na mkpughe, ma ọ bụ na ihe ọmụma, ma ọ bụ na amụma, ma ọ bụ na ozizi?
14:7 Ọbụna ndị ihe ndị na-enweghị a mkpụrụ obi nwere ike ime ka ụda, ma ọ bụ a ifufe ma ọ bụ ụbọ akwara. Ma ọ gwụla ma ha na-ewetara a dị iche n'ime na ụda, ga-esi mara nke si na ọjà na nke si na eriri?
14:8 Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na opì-ike mere ihe na-ejighị n'aka ụda, bụ ndị ga-akwadebe onwe ya maka agha?
14:9 N'ihi ya, ọ bụ na ị na-, maka ọ gwụla ma ị na-ekwu na ire na larịị okwu, ga-esi mara ihe e kwuru? N'ihi na mgbe ahụ ị ga-agwa ikuku.
14:10 Tụlee na e nwere ọtụtụ dị iche iche iche iche nke asụsụ a na ụwa, ma ọ dịghị onye na-enweghị a olu.
14:11 Ya mere, ma ọ bụrụ na m na-adịghị aghọta ọdịdị nke olu, mgbe ahụ, m ga-abụ dị ka a mba ọzọ onye m na-ekwu; na onye na-ekwu okwu ga-adị ka a mba ọzọ m.
14:12 N'ihi ya, ọ bụ na ị na-. Ma ebe ọ bụ na ị na-anụ ọkụ n'obi maka ihe ime mmụọ, -achọ edification nke Church, ka unu wee jupụta.
14:13 N'ihi nke a, kwa, onye ọ bụla nke na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche, ka ya ekpe ekpere maka nkọwa.
14:14 Ya mere, ma ọ bụrụ na m na-ekpe ekpere n'asụsụ dị iche iche, mmụọ m na-ekpe ekpere, ma uche m bụ enweghị mkpụrụ.
14:15 Gịnị bụ ọzọ? M ga-ekpe ekpere na mmụọ, na-ekpekwa ekpere na uche. M ga-abụ abụ abụ na mmụọ, na-ekwughachi abụ na uche.
14:16 Ma ọ bụghị, ma ọ bụrụ na ị gọziri naanị na mmụọ, otú ike onye, na a na steeti nke amaghị, Itinye "Amen" gị ngọzi? N'ihi na ọ na-amaghị ihe ị na-ekwu.
14:17 N'okwu a, na-, ị na-enye ekele ọma, ma onye nke ọzọ na-adịghị edified.
14:18 M na-ekele Chineke m ka m na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche n'ihi unu niile.
14:19 Ma na Church, M na-ahọrọ na-ekwu okwu ise okwu site uche m, ka m wee na-ezi ndị ọzọ nwekwara, kama ikwu puku okwu iri n'asụsụ dị iche iche.
14:20 Brothers, adịghị ahọrọ ka uche nke ụmụ. Kama, ịbụ free nke ọjọọ ka ụmụ ọhụrụ, ma na-tozuru okè n'obi-unu.
14:21 Ọ na-e dere n'iwu: "M ga-ekwu okwu ndị a na ndị ọzọ na asụsụ na ndị ọzọ na egbugbere ọnụ, na ọbụna otú, ha agaghị aṅa ntị na m, ka Jehova kwuru. "
14:22 Ya mere, ire-a ịrịba ama, abụghị maka ndị kwere ekwe, ma n'ihi na ekweghị ekwe; na amụma abụghị maka na-ekweghị ekwe, ma n'ihi na ndị kwere ekwe.
14:23 Ọ bụrụ na mgbe, dum Church ndị na-akpọkọta ọnụ dị ka otu, na ọ bụrụ na ndị niile nọ na-ekwu okwu n'asụsụ nke, na mgbe ahụ na-amaghị ma ọ bụ na-ekweghị ekwe mmadụ na-abanye, na ha agaghị na-ekwu na ị bụ ara?
14:24 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ebu amụma, na onye na-amaghị ma ọ bụ na-ekweghị ekwe na-abanye, o nwere ike kweta na ọ niile, n'ihi na ọ na-aghọta na ọ niile.
14:25 Nzuzo nke obi ya na-ahụ pụta ìhè. Ya mere, atapụsị ya ihu, ọ ga-akpọ isiala nye Chineke, na-ekwusa na Chineke bụ n'ezie n'etiti unu.
14:26 Gịnị bụ ọzọ, ụmụnna? Mgbe ị na-akpọkọta ọnụ, onye ọ bụla nke ị nwere ike na a psalm, ma ọ bụ a ozizi, ma ọ bụ a echiche, ma ọ bụ a asụsụ, ma ọ bụ nkọwa, ma ka ihe niile a ga-eme maka edification.
14:27 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-ekwu okwu n'asụsụ dị iche iche, ka e nanị abụọ, ma ọ bụ na ọtụtụ atọ, na mgbe ahụ n'aka, ka onye na-akọwa.
14:28 Ma ọ bụrụ na e nweghị onye ga-asụgharịrị, ọ ga-agbachi nkịtị na chọọchị, mgbe ahụ, ọ nwere ike na-ekwu okwu mgbe ọ bụ naanị na Chineke.
14:29 Ka ndị amụma na-ekwu okwu, abụọ ma ọ bụ atọ, ka ndị ọzọ ghọta.
14:30 ma mgbe ahụ,, ma ọ bụrụ na ihe a na-ekpughere onye ọzọ nke nọ, ka onye nke mbụ na-nkịtị.
14:31 N'ihi na unu niile ike amuma otu otu, mere na ndị niile nwere ike ịmụta na ihe nile nwere ike ume.
14:32 N'ihi na mmụọ nke ndị amụma bụ isiokwu ndị amụma.
14:33 Na Chineke abụghị nke nkewa, kama nke udo, dị nnọọ ka m na-akụziri n'ọgbakọ niile nke ndị nsọ.
14:34 Women kwesịrị nkịtị na chọọchị. N'ihi na ọ bụghị kwere ha na-ekwu okwu; ma kama, ha ga-ebutere, dị ka iwu na-ekwu.
14:35 Ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịmụta ihe ọ bụla, ka ha jụọ di ha n'ụlọ. N'ihi na ọ bụ na-eme ihere n'ihi na a nwaanyị na-asụ na chọọchị.
14:36 Ya mere ugbu a, mere Okwu Chineke n'ihu site ị? Ma ọ bụ na e zitere gị naanị?
14:37 Ọ bụrụ na onye ọ bụla yiri ka a amụma ma ọ bụ onye mmụọ nsọ na, ọ ga-aghọta ihe ndị a nke m na-edetara gị, na ihe ndị a na Jehova nyere n'iwu.
14:38 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-adịghị aghọta ihe ndị a, ọ ghara-ghọtara.
14:39 Ya mere, ụmụnna, ịnụ ọkụ n'obi na-ebu amụma, na adịghị gbochie ịsụ asụsụ.
14:40 Ma ka ihe niile a ga-eme ha ùgwù na dị ka kwesịrị ekwesị iji.
15:1 N'ihi ya, m na-eme ka unu mara, ụmụnna, Oziọma na m ezisara unu, nke unu na-natara, na nke ị na-eguzo.
15:2 Site Gospel, kwa, ị na-azọpụta, ma ọ bụrụ na ị nọgide na nghọta na m ezisara unu, ka i ghara kwere n'efu.
15:3 N'ihi na m nyefekwara unu, na mbụ, ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị, dị ka Akwụkwọ Nsọ;
15:4 na na e liri; na na ọ bilie ọzọ n'ụbọchị nke atọ, dị ka Akwụkwọ Nsọ;
15:5 na na ọ na-hụrụ Kifas, na mgbe na site iri na otu.
15:6 Ọzọ, ọ hụrụ ihe karịrị narị ụmụnna ise n'otu oge, ọtụtụ n'ime ha ka nọ, ọbụna ruo ugbu oge, ọ bụ ezie na ụfọdụ dara n'ụra.
15:7 Osote, ọ hụrụ James, mgbe ndi-ozi nile.
15:8 Ma n'ikpeazụ ha nile, ọ hụrụ site na m, dị ka ma ọ bụrụ na m nọ na-onye a mụrụ na-ezighị ezi oge.
15:9 N'ihi na abụ m onye kasị nta n'ime Ndịozi. M eru ka a kpọọ Apostle, n'ihi na m na-akpagbu ndị Church nke Chineke.
15:10 Ma, site na amara nke Chineke, Abụ m ihe m. Na amara-Ya na m bụghị efu, ebe m dogbuworo ọzọ n'ụba karịa ha niile. Ma ọ bụghị m, ma amara nke Chineke n'ime m.
15:11 N'ihi na ma ọ bụ m ma ọ bụ na ha: ka anyị na-ekwusa, n'ihi na unu kwere.
15:12 Ugbu a ma ọ bụrụ na Kraịst na-ekwusa, na o biliri ọzọ na ndị nwụrụ anwụ, olee ihe mere ụfọdụ n'ime unu ji ekwu na e nweghị mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ?
15:13 N'ihi na ọ bụrụ na e nweghị mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, mgbe ahụ Kraịst bilitere.
15:14 Ma ọ bụrụ na emeghi ka Kraist si n'ọnwu bilie, were, mgbe ahụ nkwusa anyị abaghị uru, okwukwe-unu bu kwa-abaghị uru.
15:16 N'ihi na ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebili ọzọ, mgbe ahụ adịghị Christ bilitere ọzọ.
15:17 Ma ọ bụrụ na emeghi ka Kraist si n'ọnwu bilie, were, mgbe ahụ na okwukwe unu efu; n'ihi na ị ka ga-na nmehie nile unu.
15:18 Mgbe ahụ, kwa, ndị dara n'ụra Christ gaara n'iyi.
15:19 Ọ bụrụ na anyị nwere olileanya na Kraịst maka nanị ná ndụ a, mgbe ahụ, anyị nwere ihe-ajọ gị njọ karịa ihe niile ndị mmadụ.
15:20 Ma ugbu a, Christ bilitere ọzọ na ndị nwụrụ anwụ, dị ka nkpuru mbu nke ndị na-ehi ụra.
15:21 N'ihi na-, ọnwụ si n'aka otu onye. Ya mere, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ si n'aka otu onye
15:22 Na dị nnọọ ka na Adam nile na-anwụ, otú ahụkwa ka Kraịst nile ga na-ada ka ndụ,
15:23 ma ọ bula n'ihe-adị n'usoro: Christ, dị ka nkpuru mbu, na-esote, ndị na-of Christ, bú ndi kwere ekwe ya biakwa obibia.
15:24 E mesịa bụ njedebe, mgbe ọ ga-enyefe alaeze Chineke bụ Nna, mgbe ọ ga-atọgbọrọ chakoo niile ihe gbasara onye isi, na ikike, na ike.
15:25 N'ihi na ọ dị mkpa n'ihi na ya ibu eze, ruo mgbe ọ hụwo ndị iro ya nile n'okpuru ụkwụ ya.
15:26 Egbu, onye-iro-akpọ ọnwụ ga-ebibi. N'ihi na ọ doro ihe niile n'okpuru ụkwụ ya. Na ọ bụ ezie na ọ na-ekwu,
15:27 "Ihe niile e doro ya,"-Enweghị obi abụọ ọ na-agụnye Onye doro ihe nile n'okpuru ya.
15:28 Na mgbe ihe niile ga-na e doro ya, mgbe ọbụna Ọkpara ahụ n'onwe ya ga-akwagide Onye doro ihe nile n'okpuru ya, na Chineke nwere ike niile na ihe niile.
15:29 Ma ọ bụghị, ihe ga-ndị na-eme baptizim ka ha na ndị nwụrụ anwụ do, ma ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebili ọzọ na niile? Gini mere ha-eme baptizim ka ha?
15:30 Gịnị mere na-na-anwa anyị ọnwụnwa ọ bụla hour?
15:31 Daily m anwụ, site gị anya isi, ụmụnna: ị onye m nwere n'ime Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.
15:32 Ọ bụrụ na, dị ka nwoke, M agha na anụ na Ephesus, olee otú ọ ga na-erite uru m, ma ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebili ọzọ? "Ka anyị rie ma ṅụọ, n'ihi na echi ka anyị ga-anwụ. "
15:33 Ka a ghara duhiere. Ọjọọ nkwurịta okwu na-emerụ ezi omume.
15:34 mụrụ anya, ị dị nnọọ ndị, na adịghị njikere ime mmehie. N'ihi na ụfọdụ mmadụ nwere amaghị nke Chineke. M na-ekwu nke a ka ị na-akwanyere.
15:35 Ma, mmadụ pụrụ ikwu, "Olee otú ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ?"ma ọ bụ, "Olee ụdị ahụ ha ga-alaghachi na?"
15:36 Lee ihe nzuzu! Ihe ị kụrụ ike dịghachi ndụ, ma ọ bụrụ na mbụ nwụrụ anwụ.
15:37 Na ihe ị kụrụ dị bụghị ahụ nke ga-eme n'ọdịnihu, ma a iferi ọka, dị ka nke wheat, ma ọ bụ nke ụfọdụ ndị ọzọ ọka.
15:38 N'ihi na Chineke na-enye ya ahụ, dị ka uche ya, na dị ka ọ bụla na mkpụrụ si kwesịrị ekwesị ahụ.
15:39 Anụ ahụ niile abụghị otu anụ ahụ. Ma, otu bụ n'ezie nke ndị ikom, ọzọ bụ n'ezie nke anụ ọhịa, ọzọ bụ nke anụ ufe, na ọzọ bụ nke azụ.
15:40 Ọzọkwa, e nwere ahụ nke eluigwe na ụwa. Ma mgbe otu, na-, nwere ebube nke eluigwe, ndị ọzọ nwere ebube nke ụwa.
15:41 Otu nwere ìhè anyanwụ, ọzọ ìhè nke ọnwa, na ọzọ ìhè nke kpakpando. N'ihi na ọbụna kpakpando dị iche kpakpando ihie.
15:42 N'ihi ya, ọ bụ na-na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ. Gịnị na-akụ ya n'ire ure ga-ebili ka n'ereghị ure.
15:43 Gịnị na-akụ ya n'ihe ihere, ga-ebili ka ebube. Gịnị a na-agha na adịghị ike ga-ebili ka ike.
15:44 Gịnị a na-agha na anụmanụ ahụ ga-ebili na-ahụ mmụọ. Ọ bụrụ na e nwere onye na anụmanụ ahụ, e nwekwara ahụ nke mmụọ.
15:45 Dị nnọọ ka e dere na nwoke mbụ, Adam, e mere na mkpụrụ obi dị ndụ, otú ahụ ka Adam ikpeazụ-eji a spirit dịghachi ndụ.
15:46 N'ihi ya, ihe, na mbụ, bụghị ime mmụọ, ma anụmanụ, esote na-aghọ mmụọ.
15:47 Nwoke mbụ, ịbụ n'ụwa, bụ nke uwa; nwoke nke abụọ, ịbụ nke eluigwe, ga-nke heaven.
15:48 Ihe ndị dị ka ndị dị ka ụwa dị n'ụwa; na ihe ndị dị ka ndị dị ka eluigwe dị n'eluigwe.
15:49 Ya mere, dị nnọọ ka anyị na-ebu ihe oyiyi nke ihe bụ n'ụwa, ka anyị na-ebu ihe oyiyi nke ihe eluigwe.
15:50 Ugbu a, m na-ekwu nke a, ụmụnna, n'ihi na anụ ahụ na ọbara adịghị ike-enweta alaeze nke Chineke; agaghịkwa ihe rụrụ arụ nwere ihe incorrupt.
15:51 Le, M na-agwa gị ihe omimi. N'ezie, anyị niile ga-ebili ọzọ, ma anyị agaghị niile gbanwee:
15:52 na a oge, na n'otu ntabi anya, na-afụ opi ikpeazụ. N'ihi na opi ahụ ga-ada, na ndị nwụrụ anwụ ga-ebili, apụghị ire ure. Na anyị ga-agbanwe.
15:53 N'ihi ya, ọ dị mkpa n'ihi nke a corruptibility na-eyiwe ya uwe na incorruptibility, na n'ihi na nke a na-anwụ na-eyiwe ya uwe na-adịghị anwụ anwụ.
15:54 Na mgbe a na-anwụ a na uwe-anwụghị anwụ, mgbe okwu na e dere ga-erukwa: "E lodawo ọnwụ ruo na mmeri."
15:55 "O ọnwụ, ebe mmeri gị? O ọnwụ, ebe ọgbụgba gị?"
15:56 Ma sting nke ọnwụ bụ mmehie, na ike nke mmehie bụ iwu.
15:57 Ma ekele diri Chineke, bụ onye nyere anyị mmeri site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
15:58 Ya mere, ụmụnna mm hụrụ n'anya, -eguzosi ike na-apụghị ịkwapụ akwapụ, n'ọtụtụ mgbe niile na ọrụ Onyenwe anyị, maara na gị na ọrụ bụ na-abaghị uru na-nwe-ayi.
16:1 N'ihe banyere ịnakọta nke na-mere maka ndị nsọ: dị nnọọ ka m mere ndokwa maka ụka nke Galatia, otú kwesịrị ọ na-mere na ị.
16:2 N'ụbọchị mbụ nke izu, izu ike, ka onye ọ bụla nke na ị na-site na ya onwe ya, mwube onwe ihe ga-ọma-ya mma, ya mere na mgbe m na-abata, ịnakọta ga-enweghị ka a mere mgbe.
16:3 Na na mgbe m na ugbu, onye ọ bụla ị ga-mma site akwụkwọ ozi, m ga-eziga na-agba gị onyinye Jerusalem.
16:4 Ma ọ bụrụ na o kwesịrị ekwesị ka m gaa oke, ha ga-eso m.
16:5 Ugbu a, m ga-abịa na nke gị mgbe m gafere Macedonia. N'ihi na m ga-agabiga Macedonia.
16:6 Na ma eleghị anya, m ga-anọ na ị, na ọbụna ini etuep, ka unu wee na-edu m n'ụzọ m, mgbe ọ bụla m apụ.
16:7 N'ihi na adịghị m njikere ịhụ gị ugbu a naanị na-agafe, ebe m nwere olileanya na m nwere ike ịnọgide na-na gị maka ụfọdụ ogologo oge, ma ọ bụrụ na Chineke ekwe.
16:8 Ma m ga-anọgide na na Ephesus, ọbụna ruo mgbe Pentecost.
16:9 N'ihi na a ụzọ, ukwu na-apụghị izere ezere, Jehova emegheworo m, nakwa dị ka ọtụtụ ndị na-emegide.
16:10 Ugbu a ọ bụrụ na Timoti abịarute, -ahụ na o nwere ike idi n'etiti unu enweghị atụ egwu. N'ihi na ọ na-eme na-arụ n'ọrụ Onyenwe anyị, dị nnọọ ka m na-eme.
16:11 Ya mere, ka onye ọ bụla leda ya anya. Kama, edu ya na ụzọ ya na udo, ka o wee bịakwute m. N'ihi na m na-echere ya na ụmụnna.
16:12 Kama banyere nwanna anyị, Apollo, M na-eme ka ị mara na m rịọrọ ya ukwuu na-aga ị na ụmụnna, na o doro anya na ọ bụghị uche ya na-aga na n'oge a. Ma ọ ga na-abata mgbe e nwere ohere nke oge maka ya.
16:13 mụrụ anya. Guzosie na okwukwe. Eme manfully na di ike.
16:14 Ka bụ nke gị na-mikpuru n'ime ọrụ ebere.
16:15 Na m arịọ gị, ụmụnna: Ị mara ulo Stephanus, na nke Fọtunetọs, na nke Achaicus, na ha bụ ndị mbụ na-mkpụrụ nke Achaia, na na ha raara onwe ha nye ozi nke ndi nsọ.
16:16 Ya mere unu ga-n'okpuru nwekwara mmadụ dị ka nke a, nakwa dị ka ndị niile na-na-na-akwado na-arụ ọrụ na ha.
16:17 Ugbu a, m na-aṅụrị ọṅụ na ọnụnọ nke Stephanus na Fọtunetọs na Achaicus, n'ihi na ihe na-kọrọ ị, ha na-ọnọ.
16:18 N'ihi na ha nweta ume ọhụrụ mmụọ m na gị. Ya mere, mara mmadụ dị ka nke a.
16:19 Ụka nke Asia na-ekele unu. Akwila na Prisila na-ekele unu nke ukwuu n'ime Onyenwe anyị, na chọọchị nke ihe ezinụlọ ha na, ebe mu onwem bu kwa a guest.
16:20 All ụmụnna ekele unu. -Ekele ibe nsusu ọnụ dị nsọ.
16:21 Nke a bụ ekele m aka, Paul.
16:22 Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị n'anya Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ka ọ diri anathema! Maran Atha.
16:23 Ka amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst nke na ị na-niile.
16:24 My ọrụ ebere na-na unu niile n'ime Kraịst Jizọs. Amen.